Maxaa Maraykanka ku soo celiyay Suuriya?? - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Maxaa Maraykanka ku soo celiyay Suuriya??
Dhawaan ayay ahayd markii xagjir Taram sheegay inuu askartiisa sida sharci darada ah ku joogtey Suuriya uu ka saarayo kadib markii Turkigu sheegay inuu baacsanayo Kurdiyiin boobey dhul carbeed.
Inkastoo heshiis dhexmaray Ruushka iyo Turkiga lagu dhameeyay xiisada Turkiga iyo Kurdiyiinta Suuriya haddana waxa xagjir Taram dib ugu soo celiyay askartiisa bariga Suuriya.
Bariga Suuriya waxa ku yaala saliida kooban ee dalku leeyahay, waxayna inta badan ku yaalaan saxaraha dalkaasi, waxana hore u maamuli jirey argagixisada Daacish oo taageero Ka helaysay Wahaabiyada Sucuudiga kana samayn jirey malaayiin doolar ay dawlada Kula dagaamaan.
Hadda waxa la ogaadey ujeedada dhabta ah, ayadoo markii hore ahayd inuu dalka curyaamiyo dhaqaalihiisa, haddase ay tahay inuu ilaaliyo saliida sharci darada ah ee ka baxaysa aagaas, kuna dhufto qaybtiisa inta uu ka baxayo Suuriya.
Falkan budhcadnimada ah ayaa ka soo horjeeda waxa loogu yeero qawaaniinta caalamka ee Maraykanku kow ka yahay kuwa jabiya. Dawlada Suuriya ayaa gacmaha ka xiran oo aan weerar ku qaadi karin ciidamada maafiyada ee xagjir Taram ayadoo taasi keeni karto in Ruushku soo farogasho, taasina ayna rabin.
Booyado saliid wada
Waxa maanta la arkay ugu yaraan 30 booyadood oo saliid ka qaadaya saliida bariga Suuriya una dhow xadka Ciraaq iyo webiga Yufarayt oo ay ilaalinaayaan askar Maraykanka. Waxa lacagta saliidaas badankeed leh maxiisyo u shaqeeya wasaarada difaaca.
Waa budhcadnimo caadiya saliida bariga Suuriya malaha argagixisada Daacish waxana leh dadka Suuriya degan iyo kuwa argagixisadu barakicisay e daadsan duleedka dalka ayuu yiri sarkaal u hadley Suuriya.
Si kastaba ha ahaatee waxa ka dhalatey cadho xoogleh budhcadnimada Maraykanku Ka wado Suuriya waxana loo sheegay inuu isagu Ka masuulyahay wixii Ka dhaca halkaa.
Afhayeen u hadlay Taywaan oo ah jasiirad ka ...
Erduqaan oo Faransiiska raali gelin ka dalbadey: ma heli doonaa
Ayadoo dagaalka saliideed ee u dhexeeya Turkiga iyo ...
Shilalka ka dhaca Hargeysa oo nooc cusub isku bedelay: SAWIRO
Shil gaadhi oo ka dhacay magaalada Hargeysa ayaan ...
Cudurka Kooro oo loo adeegsanayo cunaqatayn dhaqaale iyo mid ganacsi: WARBIXIN
Ayadoo wadamada aduunku intooda dib u fureen isku ...
Wararkii dilka fanaanka Oromada iyo cida lagu eedeeyay
Wararkii u dambeeyay ee ka imaanaya magaalooyinka waaweyn ...